Signatum စျေး - အွန်လိုင်း SIGT ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Signatum (SIGT)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Signatum (SIGT) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Signatum ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $38 246.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Signatum တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Signatum များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
SignatumSIGT သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.125SignatumSIGT သို့ ယူရိုEUR€0.106SignatumSIGT သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0956SignatumSIGT သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.114SignatumSIGT သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr1.13SignatumSIGT သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.789SignatumSIGT သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč2.79SignatumSIGT သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.467SignatumSIGT သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.167SignatumSIGT သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.174SignatumSIGT သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$2.79SignatumSIGT သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.968SignatumSIGT သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.676SignatumSIGT သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹9.37SignatumSIGT သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.20.97SignatumSIGT သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.171SignatumSIGT သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.189SignatumSIGT သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿3.9SignatumSIGT သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.87SignatumSIGT သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥13.23SignatumSIGT သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩148.61SignatumSIGT သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦47.33SignatumSIGT သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽9.2SignatumSIGT သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴3.45
SignatumSIGT သို့ BitcoinBTC0.00001 SignatumSIGT သို့ EthereumETH0.00033 SignatumSIGT သို့ LitecoinLTC0.00218 SignatumSIGT သို့ DigitalCashDASH0.00129 SignatumSIGT သို့ MoneroXMR0.00133 SignatumSIGT သို့ NxtNXT9.14 SignatumSIGT သို့ Ethereum ClassicETC0.0178 SignatumSIGT သို့ DogecoinDOGE35.94 SignatumSIGT သို့ ZCashZEC0.00135 SignatumSIGT သို့ BitsharesBTS4.92 SignatumSIGT သို့ DigiByteDGB4.75 SignatumSIGT သို့ RippleXRP0.428 SignatumSIGT သို့ BitcoinDarkBTCD0.00429 SignatumSIGT သို့ PeerCoinPPC0.431 SignatumSIGT သို့ CraigsCoinCRAIG56.74 SignatumSIGT သို့ BitstakeXBS5.31 SignatumSIGT သို့ PayCoinXPY2.17 SignatumSIGT သို့ ProsperCoinPRC15.62 SignatumSIGT သို့ YbCoinYBC0.00007 SignatumSIGT သို့ DarkKushDANK39.93 SignatumSIGT သို့ GiveCoinGIVE269.49 SignatumSIGT သို့ KoboCoinKOBO28.99 SignatumSIGT သို့ DarkTokenDT0.115 SignatumSIGT သို့ CETUS CoinCETI359.33